Ciyaartooyga Zidane ee u ciyaari jiray xulka wadanka Faransiiska
Zinedine Zidane(Af Faransiis : Zinedine Zidane; Af carabi: زين الدين زيدان) waa ciyaartooy kubada cagta u ciyaara wadanka Faransiiska, kaasi oo hada shaqo-joojin sameeyay. Ciyaartooygan wuxuu u dheeli jiray kooxda Real madrid mudaribkeda hada, waxu dhashay (23 june 1972 marsiliya) magicisa runta waa Zayn aldin zaydan wana Aljeeriyan asalkisu. waxu kamidyahay zaydan usturada kubada cagta, waxu laqatay muntakhabka wadankisa kob'ka aduunka iyo kob'ka yurub iyo kob'ka qaradaha, zaydan waxu kaciyara dhexda horaysa. waxu qatay kob'ka lacibka ugu fican adunka 3 mar.
Dadka oo dhanna wa kayabiyey gorti lo magacabay lacibki ugu ficna yurub 50 sano oo laso dhafay waxuna kaqeybgaliyey biliyh 125'ka lacib oo nol oo ugu fican 2004. hadana waxu u yahay mudarib'ka real madrid oo isbaniga.
2 Ciyaarihii ugu caansana
waxey uu qaxen waridka zaydan oo'ah ismacil iyo malika oo kaso jeda mandiqada qabail oo aljeeria ku dhaw 1953 intaney dagalku kabiloban aljeeria. kadib'na waxey dagen babri geskamida. 1960 nexdedi'na waxey uguren marsiliya. 1972 june 23'na waxa dhashay zayn aldin zaydan waxuna aha shantisa walalo kan uguyar. zayn usago yar bubilabay kubada cagta usago 5 sano jira waxuna laciyari jiray xafada ciyalkeda garon 12×80 leg oo uu xafada saxad uu'ah haadhow'na waxu kudar samay koxaha ciyalka
Ciyaarihii ugu caansanaEdit
qamiski zaydan ee muntakhabka oo sita raqamka 10
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinedine_Zidane&oldid=152433"
Last edited on 12 Jannaayo 2016, at 01:49
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 Jannaayo 2016, marka ee eheed 01:49.